Adeegyada Ganacsiga / Maaliyadda - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Waxaan u heellan nahay kormeerida maaliyadeed ee tusaale ahaan lacagaha degmadu ka hesho heer federaal, heer gobol iyo heer degmo ah. Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale waxay abaal marino maaliyadeed ka heleen Ururka Iskaashatooyinka Ganacsatada Dugsiga Caalamiga (ASBO) 18 sano oo isku xigta.
Adeegyada Ganacsi waxay ka kooban yihiin waaxaha Maaliyadda, Mushahar bixinta iyo Wax Iibsiga.
Sannad-maaliyadeedka Dugsiga Degmadda Robbinsdale wuxuu bilaabmayaa 1-da Luulyo ee sannad kasta, taas oo la jaanqaadaysa inta badan degmooyinka iskuullada isla markaana sharci ka ah gobolka Minnesota. Guddiga Dugsiga, sharci ahaan, waa inay lahaadaan miisaaniyad loo ansixiyo sannad maaliyadeedka soo socda ka hor bisha Luulyo 1.
Miisaaniyadda ayaa dejineysa qorshaha maaliyadeed ee sannad-maaliyadeedka soo socda. Waxay ku saleysan tahay baahida dhaqaale ee la saadaaliyay ee Degmada waxayna u adeegtaa inay u qoondeyso ilo kooban sida ugu macquulsan ee ugu macquulsan si loo siiyo fursadaha waxbarasho ee ugu wanaagsan ardayda.
Qaab dhismeedka Maaliyadeed
Dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee Degmada waxaa lagu xisaabiyaa dhowr lacagood. Sanduuq kastaa waa hay'ad xisaabeed madax-bannaan oo leh xisaab-xisaabeedyo gaar ah, hanti, deymo, isu-dheelitirnaanno maaliyadeed, dakhliyada iyo kharashyada. Miisaaniyadda, oo ay ansixiyeen Guddiga Dugsiga, ayaa ka warbixisa lacagaha soo socda:
Kharashka Raasamaalka (Sanduuqa Guud)
Agaasimaha Fulinta ee Maaliyadda
Kaaliyaha Agaasimaha Maaliyadda
763-504-8052 | Fakis: 763-504-8971
763-504-8044 | Fakis: 763-504-8971
Macluumaadka Maaliyadda / Dukumintiyada
Warbixinnada Miisaaniyadda Sannadlaha ah
Warbixin Maaliyadeed oo Sannadle ah iyo Hanti-dhawr sanadle ah
Runta ku jirta Canshuuraha
Dakhliga Degmada iyo Kharashaadka
Ogaysiinta Wareejinta elektarooniga ah
Warbixinta Baker Tilly
Qiimeynta S&P Global (Qiimeynta Bond)
Golaha La-talinta Maaliyadda (FAC)
2020-21 Miisaaniyadda dib loo eegay (Janaayo 2021)
Hanti-dhawrka sanad-dugsiyeedka 2020 ee Degmada waxaa qabtay shirkadda Malloy, Montague, Karnowski, Radosevich & Co., PA Natiijooyinka hantidhawrkaas waxaa loo soo bandhigay Guddiga Dugsiga Febraayo 1, 2021 kulan ganacsi oo caadi ah.
Degmadu waxay gudoonsiisay Shahaadada Heerka Sare ee Warbixinta Dhaqaalaha Ururka ay ku mideysanyihiin Saraakiisha Ganacsatada Iskuulka Caalamiga ah 18 sano oo xiriir ah. Abaalmarintan waxay muujineysaa sida ay Degmada uga go'antahay la xisaabtanka maaliyadeed iyo daahfurnaanta waxaana kaliya helaya tiro yar oo ka mid ah degmooyinka dugsiyada Minnesota. Ilaha macluumaadka wanaagsan waa qaybta Doodda Falanqaynta iyo Falanqaynta oo ka bilaabaysa bogga afraad ee Warbixinta Maaliyadeed ee Sannadlaha ah ee 2020 (hoos fiiri).
Sannad Maaliyadeedka 2019-2020
Sanad Maaliyadeedka 2018-2019
Sanad Maaliyadeedka 2017-2018
Sanad Maaliyadeedka 2016-2017
Warbixinta Maaliyadeed ee Sannadlaha ah (CAFR)
Soo Bandhigida Hantidhowrka
Warbixin dhameystiran (PDF)
Warbixinta Hantidhawrka (PDF)
Degmooyinka iskuullada, magaalooyinka ay ku nool yihiin dad ka badan 500, degmooyin, Golaha Metropolitan, Komishanka Madaarada Metropolitan, Degmada Xakamaynta Kaneecada Metropolitan iyo masuuliyiinta maktabadaha gobolka qaarkood ayaa looga baahan yahay inay qabtaan shirar sanadle ah oo Runta-Canshuuraha dadweynaha ah.
Soo bandhigida 2020
Soo bandhigid 2017
Xeerarka Minnesota, qaybta 123B.10, waxay u baahan tahay in guddi dugsi kasta ay daabacaan macluumaadka maadada ee warbixintan.
Sanadka Maaliyadeed 2020-2021
Shaqaalaha mushahar bixinta ayaa mas'uul ka ah bixinta adeegyo mushahar dhammaystiran oo waqtigooda ku habboon.
Shaqaaleynta ama xaqiijinta dakhliga, fadlan la xiriir Karen Timm, Maamulaha Mushaarka.
Dhammaan weydiimaha kale ee la xiriira mushahar bixinta, oo ay ku jiraan jadwalka mushahar bixinta iyo taariikhaha, shaqaalaha degmadu waxay marin uga heli karaan Xariirka Shaqaalaha (Intranet) si ay u helaan dukumiintiyo iyo macluumaad.
Khabiirka Mushahar bixinta
Markaad bixiso jeeg ahaan lacag bixin, waxaad noo idmanaysaa inaan u isticmaalno macluumaadka jeeggaaga inaan hal mar ku shubno maaliyad elektaroonig ah koontadaada ama aan uga shaqeyno bixinta lacag ahaan jeeg ahaan. Markii aan u isticmaalno macluumaadka jeeggaaga si aan ugu sameyno wareejin maaliyadeed elektaroonig ah, lacagaha waxaa lagala bixi karaa koontadaada isla maalinta aan helno lacagtaada, mana ka heli doontid jeeggaaga dib hay'addaada maaliyadeed. Isbeddelkan waxaa la sameeyay bilowgii Maarso 1, 2011.
Dib-u-eegista Taageerada Waxbarashada, Abriil 2015
Ujeeddooyinka Mashruuca iyo Baaxadda
Baker Tilly waxaa weydiistey Degmadu inay lafagurto kharashyada laxiriira taageerada waxbarashada. Dib-u-eegistayada waxaa ku jiray ujeeddooyinka soo socda:
In kor loo qaado waxtarka hawlgalka
Abuur wax ku oolnimada abaabulka iyadoo la adeegsanayo Habka Falanqaynta Waxqabadka
Baadh waxa kor ku xusan qaab xakamaynaya saamaynta ay ku yeelan karto taageerada waxbarashada iyo / ama guusha ardayga
Oktoobar 13, 2020
Heerarka iyo Danyarta (S&P) waxay sameeyeen astaan deyn iyo Qiimeyn toos ah Qiimeynta sababo la xiriira iibinta curaarta waajibaadka guud ee curaarta iyo xarumaha kale ee soo celinta curaarta lagu iibiyo Oktoobar 2020, marka loo eego ogolaanshaha Golaha Dugsiga.
Qiimeynta S&P Global waxay u qoondeysay qiimeynteeda 'AAA' muddada-dheer (iyadoo lagu saleynayo gobolka hagaajinta amaahda ee gobolka Minnesota) qiimeynta, oo leh aragti diidmo, iyo 'A-' oo salka ku haysa, oo leh aragti deggan, Degmada Dugsiga Madaxa-bannaan ee Degmada Hennepin (ISD) Maya. 281 (Robbinsdale Area Schools), taxanaha Minn. 2020 Waajibaadka guud (GO) ee xarumaha dayactirka curaarta iyo taxanaha taxanaha ah ee 2020B GO ee soo celinta curaarta. "
Haddii degmadu aysan awoodin inay sii waddo dib-u-dhiska keydkeeda oo ay dib ugu noqoto isku dheelitirnaan la'aanta qaab dhismeedka, waxaan hoos u dhigi karnaa qiimeynta hoose. Si kastaba ha noqotee, ma fileyno inaan beddelno qiimeynta muddada ku-meel-gaadhka ah ee labada sano ah.
Qiimeyn hoose oo hooseysa waxay u badan tahay in lagu saadaaliyo xasilinta diiwaangelinta degmada iyo keydku inay ahaadaan heer u dhigma kuwa asaaggooda la qiimeeyo ah. Intaa waxaa sii dheer, qaabeynta, iyo u hogaansanaanta, siyaasadaha iyo dhaqamada ayaa lagama maarmaan u ah dhaqdhaqaaqa qiimeynta kor.
Qiimeynta S&P - Oktoobar 2020
Golaha La-talinta Maaliyadeed ee Dugsiyada Robbinsdale (FAC) wuxuu siiyaa talo maaliyadeed iyo taageero Guddiga Dugsiga iyo Maamulka, oo ay ku jirto qiimeynta xaaladaha dhaqaale ee degmada, horumarinta fikradaha miisaaniyadda mustaqbalka iyo dib u eegista guud ee xaaladda maaliyadeed ee degmada. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan FAC waxaa laga heli karaa hoosta Bulshada / Ka Qayb Qaadashada / Guddiyada & Fursadaha Tabaruca .
Maaliyadda Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo
Waa maxay sababta Gudiga Dugsiga dib loogu soo celinayo loona soo saarayo curaarta? Maxay tani muhiim u tahay maxaana looga jeedaa?
Halkee baan ka heli karaa duubista doodaha wadajirka ah ee maaliyadda dugsiga?
Si fudud haddii loo dhigo, dib u soo celinta iyo dib u soo celinta waxay ka dhigan tahay bixinta curaarta oo dhan ka dibna dib loogu soo celinayo dulsaar hoose si loo badbaadiyo doolar cashuur bixiye.Tani la mid ma aha dib u maalgelinta deynta guryaha.
Bonds-ka waxaa sida caadiga ah soo bixiya degmooyinka dugsiga si ay ugu maalgeliyaan mashaariicda Dayactirka Xarumaha Muddada-dheer, mashaariicda dhismaha ama mashaariicda kale ee raasumaalka ah.
Guddiga Dugsiga ee Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale waxay u codeeyeen si aqlabiyad leh inay ku ansixiyaan xallinta soo celinta curaarta iyo dib-u-soo-celinta inta lagu gudajiray kulankoodii caadiga ahaa ee Isniinta, Sebtember 21, 2020. Tani waxay badbaadin doontaa cashuur-bixiyeyaasha lagu qiyaasay $ 1.5 milyan oo doolar 11ka sano ee soo socda sababtoo ah hoos u dhaca hadda jira. dulsaarka.
Dhamaan keydkaan waxay u faa'iideysan doonaan faa iidada canshuur bixiyaasha degan degmada iyo ganacsiyada degmada iyada oo loo marayo dhimista canshuuraha canshuuraha ee mustaqbalka la xiriira loomana adeegsan karo ujeedooyin kale oo degmo ee Gobolka Minnesota Statute.
Degmadu ma aysan dheereyn taariikhda biseylka asalka ah ee curashada celinta. Taariikhaha biseylka asalka ah ee curashada lacag celinta ayaa la mid ah taariikhda qaan-gaarnimada ee bonds-ka la soo celiyay iyo dib loo soo saaray.
Intaa waxaa sii dheer, degmadu weligeed kama baaqan bixinta deynta. Canshuurta sanadlaha ah waxaa ku jira qaddarro laga dhigayo maamulaha adeegga deynta loo baahan yahay iyo bixinta dulsaarka sannad kasta oo soo socda waxaana loo isticmaali karaa oo keliya ujeeddadaas. Dhamaan howlaha deynta waa lala socdaa, la wargaliyaa oo waxaa lagu hubiyaa sanduuq gooni ah, oo aan lagu darin lacagaha kale ee degmada.
Guddiga Dugsiga waxaa lagu cusbooneysiin doonaa keydka dhabta ah ka hor inta aan la codeynin si loo aqbalo dalabka dulsaarka yar kulankooda sida joogtada ah loo qorsheeyay Isniinta, Oktoobar 19.
- Oktoobar 15, 2020
Xubnaha bulshada waxay fursad u heleen inay waxbadan ka bartaan maaliyadda iskuulka, oo ay kujiraan isbeddelada ku dhaca kaabayaasha waxbarashada gaarka ah iyo saameynta isqorista furan inta lagu gudajiray wadahadal dalwad ah Khamiistii, Oktoobar 8.
Doodda waxaa ka soo qaybgalay khubarada gobolka Dr. Tom Melcher iyo Paul Ferrin oo ka socda Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE). Labada lamaane ayaa ka wada hadlay saamaynta gaarka ah ee Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale waxayna ka jawaabeen su'aalaha dhagaystayaasha.
Haddii aadan awoodin inaad nagu soo biirto, duubista doodda ayaa hoos lagu dhajiyay. Halkan guji si aad dib ugu eegto soo bandhigida PowerPoint. Halkan guji si aad u aqriso qoraalka.
Tom Melcher wuxuu ahaa Agaasimaha Dhaqaalaha Dugsiga ee Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE) muddo afartan sano ah. Wuxuu howlgab noqday Febraayo 2020, laakiin wuxuu sii wadaa inuu shaqeeyo waqti-dhiman si uu uga caawiyo u-wareejinta hoggaanka qaybta cusub. Wuxuu sidoo kale taageero siiyaa Guddiga Shaqada Maaliyadeed ee Dugsiga ee Guddoomiyaha. Kahor intaanu ku biirin MDE, wuxuu kaaliye maamule ganacsi ka ahaa degmada Collier County, Dugsiyada Dadweynaha ee Florida. Melcher wuxuu kasbaday Bachelor of Degree Science in Dhaqaalaha Jaamacadda Wisconsin-Madison iyo Ph.D. ee Hogaanka Waxbarashada ee Jaamacadda Florida.
Paul Ferrin hadda waa kormeeraha Maalgelinta Waxbarashada Gaarka ah iyo kooxda wada shaqeynta Xogta ee MDE. Wuxuu ka soo shaqeeyey waaxda ilaa sanadkii 2013 doorar kala duwan oo ay ka mid yihiin la socodka kharashaadka waxbarashada gaarka ah iyo bixinta falanqaynta xogta kooxda shaqada ee maalgelinta waxbarashada gaarka ah. Ferrin waxay kasbatay Bachelor of Science in Actuarial Science oo ay ka heshay Jaamacadda Minnesota iyo Bachelor of Science in Accounting oo ay ka qaadatay Jaamacadda Metropolitan State.
- Oktoobar 11, 2020
Warbixinta Hanti Dhawrka Gobolka
Natiijooyinka ka soo baxa warbixintan waa inay siisaa raaxo codsadeyaasha, maadaama aan dhibaato nidaam qoto dheer laga helin. Ma aanan helin wax caddeyn ah oo ku saabsan shakiga laga qabo qalad laga gudbiyay shaqaale gaar ah
Julie Blaha, Hantidhawraha Gobolka
Xafiiska Hantidhawrka Gobolka (OSA) waxaa laga codsaday inay dib u eegis ku sameeyaan Dugsiyada Madaxa Bannaan ee Degmada 281, Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale, si ay u eegaan buugaagta, diiwaanada, xisaabaadka iyo arrimaha Degmada inta u dhexeysa Julaay 1, 2015, illaa Maarso 31, 2019. The xafiiska hanti dhowrka gobolka ayaa biil siin doona Degmada qiyaastii $ 69,000. Degmadu waxay qiyaaseysaa in $ 30,000 oo dheeri ah lagu kharash gareeyay taageerida shaqaalaha iyo sahayda.
Nidaamku wuxuu qaatay toddobo bilood (ku dhowaad 700 saacadood) in la dhammaystiro, waxaana warbixinta la sii daayay Isniinta, Juun 15, 2020. Warbixinta waxaa laga heli karaa bogga internetka ee Xafiiska Hanti Dhawrka Gobolka.
Dhaqaalaha iskuulka iyo warbixinnada maaliyadeed had iyo jeer ma sahlana in la fahmo, waana soo dhaweyneynaa su'aalaha iyo welwelka bulshadayada. Waxaan sii wadeynaa inaan sifeyno siyaasadahayaga iyo dhaqamadeena taageerida siyaasadeena sinaanta degmada. Waxaan sidoo kale kugu martiqaadeynaa inaad ka soo qeybgasho ama aad aragto shirarka guddiga iskuulka si aad ula socoto arrimaha degmada. Waad ku mahadsantahay taageeradaada joogtada ah ee Degmada 281!
1. Faa'iidooyinka Kale ee Shaqada Kadib (OPEB)
2. Miisaaniyadda iyo Miisaaniyadda
3. Siyaasadaha Kaarka Deynta iyo Isticmaalka
4. Oggolaanshaha Kharashaadka
5. Helitaanka Macluumaadka Dhaqaalaha / Miisaaniyadda
6. TIES / Qandaraaska Sourcewell
7. Lacagaha Cinwaanka I
8. Lacagaha Magdhowga
9. Diiwaangelinta Furan
10. U hogaansanaanta Qandaraaska
11. Lacag celinta Dib udajinta
12. Boodhadhka goolasha
13. Barnaamijka Dakhliga Dayactirka Xarumaha Muddada-Dheer
14. Isku dhaca xiisaha - TIES / Sourcewell Contract
15. Horumarinta Xirfadeed / Teknolojiyadda oo la istaajiyo
16. Shaqaalaynta Siyaasadaha iyo Dhaqanka
17. Kulamada Gudiga Iskuulka
Codsi: Bixi macluumaad laxiriira aaminaada aan laga noqon karin ee Degmada ee ku saabsan qarashka daryeelka caafimaadka shaqaalaha howlgabka ah. Tan waxaa ka mid ahaa in la garto goorta la aaminay iyo sida loo maalgeliyey; go'aaminta haddii kharashyada daryeelka caafimaad laga bixiyay Sanduuqa Guud ee Degmada; iyo, haddii kharashyada daryeelka caafimaadka laga bixiyay Sanduuqa Guud, go'aaminta haddii kalsoonida aan laga noqon karin ay dib u soo celisay Sanduuqa Guud.
Talo- siinta OSA: Waxaan kugula talineynaa Degmadu inay sameyso qorshe qeexaya goorta qadarka la go'aaminayo in laga bixiyo Sanduuqa Sanduuqa Faa'iidooyinka Shaqada Kadib. Qaddarkaas waa in la go'aamiyaa ka hor inta aan la sii deyn xisaabaadka maaliyadeed ee sannadlaha ah si ay warbixinnada maaliyadeed u muujiyaan xaddiga aaminka ee lacagaha waxtarka mustaqbalka.
Jawaabta Degmada: Degmadu waxay hadda horumarinaysaa Guddi kale oo la-talin ah Faa'iidooyinka Shaqada Kadib (OPEB) oo ay kaqeyb qaadanayaan Golaha La-talinta Dhaqaalaha (FAC), oo ay xallinayaan Golaha Dugsiga Maajo 18, 2020 . Sida lagu sheegay warbixinta OSA, Xeerarka Minnesota, qeybta 471.6175, hoosaadka 7 (b) , waxay u idmanaysaa Degmadu inay kala baxdo lacagaha ka timaadda kalsoonida aan laga laaban karin ee OPEB ee dheefaha shaqaalaynta ka dib ee la siiyo saraakiishii iyo shaqaalihii hore.
Sannadkii 2019, Degmadu waxay weydiisatay MMKR (hantidhawrro madax bannaan oo dibadda ah) inay diyaariyaan dib u heshiisiin ku saabsan kalsoonida OPEB, iyadoo la isbarbar dhigayo kharashaadka shaqada ee u qalma ee ay bixisay Degmadu iyo inta ay degmadu dooratay inay kala soo baxdo koontada kalsoonida ee OPEB sanadihii la soo dhaafay. MMKR waxay go'aamisay in degmadu ka soo xareynayso lacag ka yar tii lagu aaminay, iyadoo degmadu daboolayso kharashyo badan; Degmadu waxay lahayd $ 4,749,736 oo aan hoos uga dhicin kalsoonida OPEB sanadihii hore. Bishii Diseembar 2019, Degmadu waxay hoos u dhigtay $ 4,749,736 oo ah hal-sawir, kaas oo lagu oggolaaday qaanuunka kor ku xusan iyo sidoo kale oggolaanshaha MMKR iyo Waaxda Waxbarashada ee Minnesota.
Codsi: Bixi macluumaad laxiriira dheelitirka sanduuqa iyo miisaaniyadda Sanduuqa Guud ee Degmada.
Talo Soo Jeedinta OSA: Waxaan kugula talineynaa Degmadu in ay dheelitirto miisaaniyadeeda ayna kordhiso dheelitirka sanduuqa ee Sanduuqa Guud si looga fogaado deynta hawlgalka ee qaanuuneed.
Waxqabadka Degmadda: Sannad-maaliyadeedka Dugsiga Degmadda Robbinsdale waxay bilaabmaysaa 1-da Luulyo ee sannad kasta, taas oo la jaanqaadaysa inta badan degmooyinka dugsiga. Gudiga Sare Dugsiyada, by sharciga ( Minnesota Statutes, section 123B.77, hoosaadka 4) , waa in ay leedahay miisaaniyad qaatay sanad maaliyadeedka soo socda ka hor miisaaniyadda Degmada 1. July waxaa laga heli karaa Adeegyada Ganacsiga / Maaliyadda on webpage .
Dhaqaalaha iskuulku waa isku dhafan yihiin waxaana ka mid ah durdurro maaliyadeed oo kala duwan oo ay ku jiraan canshuuraha canshuuraha, maalgelinta gobolka iyo federaalka, taas oo isbedbeddeli karta sannad illaa sannadka. Isqoristu waxay kaloo gacan ka gaysataa maalgalinta degmadeena waxayna saameyn ku yeelan kartaa miisaaniyada sidoo kale. Degmadu waxay si adag uga shaqaysay shantii sano ee la soo dhaafay si istiraatiijiyad leh dib-u-waafajin miisaaniyadeed si aan horay ugu soconno miisaaniyado isku dheellitiran oo aan dib ugu dhisno dheelitirka miisaaniyadda iyadoo loo marayo habab kala duwan, oo ay ka mid yihiin:
Tilmaanta Warbixinta Baker Tilly (2014/2015)
Wadashaqeyn lala yeeshay kooxdeena shaqaalaha
Waxaan lashaqeynay bulshadeena sidii loo meel marin lahaa kororka aftida waxqabadka ee sanadka 2018 (sanad miisaaniyadeed wax ku ool ah 2019)
BallotPedia, waa hay'ad samafal ah, waxay muujineysaa inaan shaqeyneyno ilaa 1992 si aan uga shaqeyno dib u dhiska isku dheelitirka.
Codsi: Bixi macluumaad ku saabsan siyaasadaha Degmada iyo adeegsiga kaararka deynta (sidoo kale loo yaqaan kaararka wax iibsiga ama Kaararka P).
Talo- siinta OSA: Waxaan ku talinaynaa in nidaamka iyo nidaamka nidaamka kaararka P Card-ka ee degmada dib loogu noqdo lana cusbooneysiiyo si loogu daro waxyaabaha ay degmadu u isticmaali karto una isticmaali jirtay kaararka P, sida safarka. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa xisaabaadka kaararka P-ka ee Degmada, sida uu dhigayo nidaamka kaararka P Card iyo habraacyada, in lagu sameeyo si joogto ah / meerto ah. Si loogu hoggaansamo qawaaniinta Minnesota, dhammaan iibsiyada waa in lagu taageeraa rasiidhada la soo koobay ama foomamka sheegashada. Dukumiintiyada waa inay kujiraan macluumaad kusaabsan waxa la iibsanaayo iyo cida loogu talagalay (tusaale, goobta dhismaha, fasalka, barnaamijka). Iibsashada la xiriirta cuntada waa inay ku jirtaa sharaxaad ku saabsan cidda cuntada (cuntada) loo soo iibsaday iyo cidda ka soo qeyb gashay, sababta ay tahay in loo iibsado cuntada (yaasha), iyo sababta ay lagama maarmaanka u ahayd in la siiyo cunto xilligaas.
Jawaabta Degmada: Siyaasadda degmada waxay u baahan tahay dukumiintiyo ku saabsan iibsashada lagu bixiyay kaararka P. Macaamillada billaha ah waxaa dib u eegay oo saxiixay midkood Agaasime Fulineed ama Agaasimaha Barnaamijka. Degmadu waxay hirgelisay tilmaamaha oggolaanshaha safarka inta lagu jiro sanad dugsiyeedka 2019-2020. Si loo hubiyo in hababka xisaabaadka iyo kontaroolada ay isla jaanqaadayaan, Degmadu waxay dib-u-eegis dhameystiran ku sameyneysaa buuga P Card. Intaas waxaa sii dheer, shaqaalaha maaliyadeed ee degmadu waxay hirgelin doonaan dib-u-eegis muunad qaadashada kaararka P-ga ah oo bil kasta qayb ka ah howlaha dib-u-heshiisiinta.
Sebtember 2020 Cusboonaysiinta Degmada: Dib-u-eegista iyo cusbooneysiinta Buugga 'P Card' waxaa la dhammaystiray Agoosto 2020. Habka dib-u-eegista sambalku wuxuu bilaabmay Agoosto 2020.
Codsi: Bixi macluumaadka la xiriira oggolaanshaha degmada ee bixinta kharashyada, oo ay ku jiraan dokumentiyada ay tahay in lagu daro daqiiqadaha kulanka Guddiga Dugsiga ee la xiriira kharashyada.
Talo- siinta OSA: Waxaan ku talineynaa in Guddiga Dugsiga ay tixgeliyaan u oggolaanshaha oggolaanshaha kharashyada kormeeraha guud ama Agaasimaha Maaliyadda sida lagu oggol yahay Xeerarka Minnesota, qeybta 123B.52, hoosaadka 2 .
Jawaabta Degmada: Kharashaadka degmada ayaa sii wadi doona in lagu qoro warbixin bixin bixin iyadoo la raacayo ajandaha ogolaanshaha inta lagu jiro shirarka Guddiga Dugsiga. Nidaamyada degmadu waxay bixiyaan oggolaanshaha iibka waaxda wax iibsiga ee degmada, maamulayaasha dugsiga ama madaxda waaxyaha. Degmadu waxay leedahay habraac loogu talagalay adeegyada qandaraasyada iyo qaansheegta ayaa dib loo eegay si loo hubiyo in oggolaansho sax ah ay jirto kahor intaan la baaraandegin lacagaha.
Sebtember 2020 Cusbooneysiinta Degmada: Degmadu waxay dib u eegis ku sameysay nidaamka maamulka 701AP waxayna kula talisay Guddiga Dugsiga inay u qaataan Qawaaniinta 70, taas oo u oggolaanaysa Degmadu inay u wakiilato oggolaanshaha kharashyada Agaasimaha Guud ama Agaasimaha Maaliyadda. Guddigu wuxuu u codeeyey Sebtember 21 inuu oggolaado.
Codsi: Bixi macluumaad ku saabsan helitaanka macluumaadka miisaaniyadda maamulayaasha dugsiyada kala duwan.
Talo bixin kama bixiso OSA. Warbixinta ayaa sheegtay in iyadoo lagu saleynayo imtixaanadooda, maamulayaashu ay marin u heli karaan macluumaadka miisaaniyadda ee ay masuulka ka yihiin. Maamulaha ayaa mas'uul ka ah maareynta wadarta miisaaniyadda. Markaa, cabbirka sheyga xad-dhaafka ahi wuxuu u baahan yahay in lagu daboolo qaddarrada shaybaarrada meelaha kale ee miisaaniyaddooda.
Jawaabta Degmada: Degmadu waxay leedahay nidaam ay maamulayaasha dugsiyadu ku helaan macluumaadka miisaaniyadda. Maamulayaasha dhismaha iyo agaasimayaasha barnaamijku waxay ka heli karaan xogtooda miisaaniyadda nidaamka Skyward Financial System. Maamulayaasha, Maamulayaasha Barnaamijka iyo / ama shaqaalahooda loo qoondeeyay ayaa warbixin ku sameyn kara Nidaamka Maaliyadeed ee Skyward si ay u helaan macluumaad miisaaniyadeed oo kooban oo ay ku jiraan miisaaniyadda, kharashyada, amarrada iibsiga iyo isu dheelitirka. Warbixin faahfaahsan ayaa lagu socodsiin karaa si loo daawado dhammaan macaamil kasta ee lambar miisaaniyadeed kasta. Labadan warbixin midkood ayaa la maamuli karaa wakhti kasta.
Codsi: Bixi macluumaad ku saabsan oggolaanshaha qandaraasyada shirkadda 'TIES / Sourcewell'. Codsadeyaashu waxay kaloo codsadeen macluumaad laxiriira xiriirka ka dhexeeya Degmada iyo TIES / Sourcewell, kaas oo looga hadlayo qodobka 14.
Talo- siinta OSA: Waxaan ku talineynaa in Guddiga Dugsiga uu hirgeliyo habraacyada si loo hubiyo in qandaraasyada adeegga xirfadeed ay Guddigu oggolaadeen ama oggolaanshaha loo qoondeeyay Kormeeraha Guud ama Maareeyaha Ganacsiga sida lagu oggol yahay Xeerarka Minnesota, qaybta 123B.52, hoosaadka 2 .
Jawaabta Degmada: Degmadu waxay leedahay nidaam ay qandaraasyada ku ansixiyaan guddiga dugsiga.
Codsi: Bixi macluumaad laxiriira sida barnaamijka Title I loo maalgeliyo iyo macluumaadka ku saabsan lacagaha la siiyo degmooyin kale ee iskuulada leh lacagahaas.
Talo bixin kama bixiso OSA. Warbixintu waxay siisay macluumaad ku saabsan warbixinta kharashka Cinwaanka I ee Degmada iyo lacagaha la siiyo degmooyin kale, iyadoo aan la xusin farqi u dhexeeyo, waxayna tilmaamtay in Degmadu ay bixisay qorshooyin ficil sixitaan ah oo wax looga qabanayo ka warbixinta natiijooyinka inta lagu gudajiro sannad xisaabeedkeeda.
Jawaabta Degmada: Iyadoo lagu saleynayo talooyinka ka soo baxa Sannad-Maaliyadeedka Sannad-xisaabeedka 2019 ee ay sameeyeen MMKR (hanti-dhawrka dibadda ee madaxa bannaan) Agaasimaha Hawlgallada Dhaqaalaha ee Degmada iyo Isku-duwaha Cinwaanka I ayaa dib u eegaya dhammaan mushaaraadka iyo manfacyada lagu soo rogay barnaamijka Title I si loo hubiyo in keli kharashaadka la oggol yahay la sheeganayo. lacag celinta federaalka. Nidaamkani wuxuu bilaabmay sanad maaliyadeedka 2020 (July 1, 2019).
Codsi: Bixi sharraxaad ku saabsan waxa ay degmooyinku degmooyinku u baahan yihiin inay sameeyaan si ay u go'aamiyaan sida loo qoondeeyey iyo loo isticmaalay lacagaha magdhowga ah.
Talo bixin kama bixiso OSA. Warbixinta ayaa qeexday sida Degmadu u qoondeyso oo ay u doorato adeegsiga xaq u leh ee lacagaha magdhowga ah. Lacagaha magdhowga ah waxaa lagu go'aamiyaa Sharciyada Minnesota, qaybta 126C.10, hoosaadka 3 (a) .
Jawaabta Degmada: Nidaamyada degmadu waxay waafaqsan yihiin qawaaniinta Gobolka Minnesota.
Codsi: Bixi faahfaahin ku saabsan shuruudaha diiwaangelinta furan iyo nidaamka.
Talo bixin kama bixiso OSA. Warbixinta ayaa qeexday shuruudaha diiwaangelinta furan; xogta ardayda ee Degmada; iyo sida ay Degmadu u maamusho gaadiidka una adeegsato qorshaheeda Kasbashada iyo Midaynta. Xeerarka Minnesota, qaybta 124D.03, hoosaadka 4, waxay u ogolaaneysaa arday kasta inuu furo isqorista ama ka bixitaanka degmada ee leh qorshaha Kasbashada iyo Isdhexgalka ee ay ansixisay MDE waqti kasta oo sanad dugsiyeedka ah.
Jawaabta Degmada: Degmadeenu ma laha xuduudo xiran, diiwaangelinta furanna waa la ogolyahay iyadoo loo marayo Xeerarka Minnesota, qaybta 124D.03, hoosaadka 4 . Wadarta isqorista furan ee sanad dugsiyeedka 2015-2019 ayaa hoos ku taxan.
Sanad Dugsiyeedka 2015-2016
Ardayda Deggan ee Diiwaangashan: 1,643
Ardayda Aan Deganeyn ee Ka Diiwangashan: 1,739
Saameynta saafiga ah ee Isqorista Furan: 96
Sanad Dugsiyeedka 2016-2017
Ardayda Deggan ee Diiwaangashan: 1,677
Ardayda Aan Deganeyn ee Ka Diiwangashan: 1,745
Saameynta saafiga ah ee Isqorista Furan: 68
Sanad Dugsiyeedka 2017-2018
Ardayda Deggan ee Diiwaangashan: 1,732
Ardayda Aan Deganeyn ee Ka Diiwangashan: 1,653
Saameynta saafiga ah ee Isqorista Furan: (79)
Sanad Dugsiyeedka 2018-2019
Ardayda Deggan ee Diiwaangashan: 1,760
Ardayda Aan Deganeyn ee Ka Diiwangashan: 1,818
Saameynta saafiga ah ee Isqorista Furan: 58
Codsi: Bixi macluumaad ku saabsan habka qandaraaska iyo haddii oggolaanshaha Guddiga Dugsiga la helay.
Talo Soo Jeedinta OSA: Waxaan kugula talineynaa dhammaan qandaraasyada iyo dukumiintiyada la xiriira in ay ilaaliso Degmadu.
Jawaabta Degmada: Degmadu waxay leedahay hanaan loo maro adeegyada qandaraaska haysta. Degmadu waxay raacdaa jadwalka haynta ee lagula taliyay ee dhammaan qandaraasyada iyo wixii dukumiintiyo la xiriira.
Codsi: Bixi macluumaad ku saabsan dib-u-bixinta kharashyada dib-u-dejinta ee loogu talagalay hawl-wadeennada Golaha Wasiirrada ee Degmadu soo kireysatay.
Talo bixin kama bixiso OSA. Warbixinta ayaa qeexday lacag bixinta wareysiga Kormeeraha guud iyo kharashaadka dib udajinta (qofka kaliya ee uqalma kuwan) waxayna ogaatay in lacagaha loo ogolaaday qandaraas.
Jawaabta Degmada: Lacag celinta dib udajinta waa la ogolyahay qandaraas shaqaale, taas oo ah wax caado u ah dagmooyinka iskuulka.
Codsi: Bixi macluumaad ku saabsan iibsashada laba shaashad fiidiyow oo loogu talagalay dugsiyada sare (Armstrong iyo Cooper) ee Degmada, gaar ahaan oggolaanshaha iibsiga, maalgelinta iyo siyaasadaha loogu talagalay xayeysiinta.
Talo- siinta OSA: Waxaan kugula talineynaa Guddiga inuu ansixiyo qandaraasyada iyo heshiisyada ku saabsan kafaala-qaadka ama xayeysiinta oo aan u oggolaanno wixii dakhli ah ee la xiriira xayeysiinta.
Jawaabta Degmada: Degmadu waxay leedahay hannaan lagu ansixiyo xayeysiinta si loo hubiyo qandaraasyada kafaala qaadida iskuulka iyo dakhliga xayeysiinta inay helaan ogolaanshaha guddiga. Wixii macluumaad dheeraad ah, ka eeg Nidaamka Maamulka 905AP .
Codsi: Bixi macluumaad ku saabsan Barnaamijka Dakhliga Dayactirka Xarumaha Muddada-Dheer (LTFM), gaar ahaan haddii ay waafaqsan tahay xeerarka gobolka ee la xiriira maalgelinta barnaamijka iyo haddii kharashyada kor ku xusan lagu daray barnaamijka.
Talo bixin kama bixiso OSA. Warbixinta ayaa qeexday in Barnaamijka Dakhliga ee LTFM uu waafaqsan yahay qawaaniinta gobolka isla markaana aan wax lacag ah oo dulsaar ah la xusin maadaama kharashyada oo dhami ay yihiin kuwa wax iibiya, rukhsadaha, bixinta curaarta iyo mushaharka shaqaalaha toos ula shaqeeya barnaamijka.
Waxqabadka Degmada: Barnaamijka Dakhliga Dayactirka Xarumaha Muddada Dheer wuxuu sii wadaa inuu u hoggaansamo xeerarka gobolka, oo ay ku jiraan maalgelinta iyo kharashyada kor ku xusan. Sannad kasta, qorshaha waxaa oggolaada Guddiga Dugsiga iyo Waaxda Waxbarashada ee Minnesota. Xeerarka Minnesota, qaybta 123B.595 ayaa tilmaamaysa shuruudaha looga baahan yahay Barnaamijka Dakhliga LTFM.
Codsi: Bixi macluumaad laxiriira xiisada xiisaha leh ee laxiriirta xubinta Gudiga Iskuulka Mr. John Vento (xubin katirsan Vento) iyo adeegyada ay degmada siiso TIES / Sourcewell.
Ma jirto talo bixin ay bixisay OSA sidoo kale ma jirin wax natiijooyin ah oo xadgudub ku ah xiisaha sharciga. Warbixinta OSA waxay xustay in haddii xubin guddiga ka mid ah ay isku dhacsanaayeen nooca qandaraaska adeegga, ay jiraan wax ka reeban sharciga.
Jawaabta Degmada: Eedeymaha isku dhaca danaha ayaa laga keenay Agaasimaha Golaha Dugsiga John Vento bishii Oktoobar 2019, xilligaas oo uu xilligaas ahaa guddoomiyaha guddiga. Mudane Vento waxaa u shaqaaleeyay hay'adaha TIES / Sourcewell oo ay degmadu qandaraasyo kula gashay adeegyada tikniyoolajiyadda. Agaasime Vento wuxuu shaaca ka qaaday khilaaf danaha (aqoonsashada loo shaqeeyaha) degmada dugsiga mid kasta oo ka mid ah toddobadii sano ee uu ka shaqeynayay guddiga. Agaasime Vento wuu ka aamusay dhamaan afarta cod ee gudiga ee la xiriira qandaraasyada loo shaqeeyaha intii uu guddiga ku jiray.
Codsi: Bixi macluumaad ku saabsan siyaasadda degmada ee dib-u-bixinta lacag-bixinta xirfadeed, sii wadida waxbarashada xirfadeed iyo teknoolojiyada.
Talo- siinta OSA: Waxaan kugula talineynaa in daba-gal joogto ah iyo duubis lagu dabaqo dhammaan lacagaha wax lagu barto iyo tikniyoolajiyadda, oo ay kujirto raacitaanka siyaasadda Degmada Dugsiga. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa Degmadu inay ula dhaqanto macaashka faqriga ah shaqaalaha si ku habboon ujeeddooyinka canshuuraha federaalka iyo gobolka.
Jawaabta Degmada: Degmadu waxay leedahay hanaan ay ku raadjoogto lacagta iyo lacagaha teknoolajiyada. Degmadu waxay bilaabi doontaa cashuur siinta shaqaalaha dakhliga ay ka heshay lacag celinta teknolojiyadda sannad maaliyadeedka 2021 (laga bilaabo Julaay 1, 2020).
Sebtember 2020 Cusbooneysiinta Degmada: Lacag celinta tikniyoolajiyadda waxaa hadda lagu maareynayaa waaxdayada mushahar bixinta, iyada oo canshuuraha ku habboon laga shaqeynayo. Tani waxay bilaabatay bishii Ogos 28, 2020 mushahar bixinta.
Codsi: Bixi macluumaad laxiriira ku dhaqanka shaqaalaynta Degmada.
Talo bixin kama bixiso OSA. Warbixinta ayaa tilmaamtay inay tijaabiyeen siyaasada Gudiga Dugsiga ee ansixinta shaqaale cusub. Dhammaan shaqaalihii la imtixaamay waxay u hoggaansamayeen siyaasadda Guddiga. Degmadu waxay leedahay hanaan loo maro oo ku saabsan shaqaalaynta siyaasadaha iyo dhaqamada.
Jawaabtii Degmada: Wax khalad ah lagama helin habsocodsiintii shaqaalaynta degmada iyo go'aannadii shaqaalaynta ee Juun 2019 ka dib markii ay baaritaan ku sameeyeen baare saddexaad oo madax-bannaan oo ay kireystaan Guddiga Dugsiga. Intaa waxa u dheer, Degmada Dugsiga Robbinsdale Area waxay raacdaa 400-taxane ah oo xeerar iyo nidaamyo maamul oo ay u ansixiyeen Guddiga Dugsiga shaqaalaha iyo shaqaalaha, iyo sidoo kale shuruudaha shaqaalaynta gobolka iyo federaalka.
Codsi: Bixi macluumaad ku saabsan shirarka Guddiga Dugsiga iyo u hoggaansamida sharciyada kulanka furan iyo daabacaadda daqiiqadaha kulanka Guddiga Dugsiga.
Talada OSA: Waxaan kugula talineynaa in liiska xubnaha Golaha Dugsiga iyo dhamaan dadka kale ee jooga kulamada uxiran wadahadalada shaqada loo bandhigo dadweynaha kadib kulanka xiran, sida uu dhigayo Xeerarka Minnesota, qeybta 13D.03, hoosaadka 1 . Sida ugu dhaqanka fiican, waxaan kugula talineynaa in waqtiga cayiman ee bilowga iyo goobta shirarka noocan oo kale ah lagu cayimo kulanka furan. Waxaan sidoo kale ku talineynaa daqiiqado ka mid ah kulamada Guddiga Dugsiga in lagu daabaco 30 maalmood gudahood kulanka, sida ay u baahan tahay Xeerarka Minnesota, qeybta 123B.09, hoosaadka 10 . Xafiiska gobolka ee ku habboon Degmada Dugsiga ama xubnaha dadweynaha inay la xiriiraan wixii macluumaad dheeri ah ee shuruudaha kulanka furan waa Xafiiska Ku Dhaqanka Xogta ee Waaxda Maamulka ee Minnesota.
Jawaabta Degmada: Degmadu waxay sii wadaa inay sifeeyaan dhaqamada si loo hubiyo in Nidaamyada Maamul ee jira la raaco loona hogaansamo qawaaniinta Minnesota ee shirarka furan.
Daboolista Caymiska Shilka Ardayga ee dhaafka
Dugsiyada Robbinsdale Area waxay ku dadaalayaan inay ardayda u fidiyaan jawi aamin ah. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo dadaalka ugu fiican, shilalka mararka qaarkood way dhacaan. Xitaa waxqabadyada carruurnimada caadiga ah sida ku ciyaarista garoonka ciyaarta waxay leeyihiin dhaawac. Degmadu ma bixiso caymiska shilalka dhici kara inta lagu jiro maalin dugsiyeedka caadiga ah.
Adeeg ahaan ardayda iyo qoysaskooda, degmadu waxay siisaa fursad ay ku soo iibsadaan caymiska ardayda ee qiime jaban qiimo jaban. Caymiskani wuxuu kaa caawin karaa jarista iyo wada-bixinta hoos yimaada qorshahaaga caymiska caafimaadka ama wuxuu bixin karaa caymiska koowaad ee shilalka marka uusan jirin caymis caafimaad. Dhammaan nashaadaadka iskuulku kafaalo qaaday iyo kormeerka iyo waqtiga lagu qaatay dugsiga waa la daboolay sida lagu qeexay shuruudaha iyo xaddidaadda siyaasadda. Qoysasku waxay iibsan karaan caymiska 24-ka saacadood ee loogu talagalay kororka lacagta.
Fadlan ogow, caymiska ayaa lagula talinayaa ardayda ka qayb qaadanaya ciyaaraha fudud ee degmada.
Warqad Macluumaad ah - Ingiriisi
Warqad Xog ah - Isbaanish
Xaashida Caymiska Caymiska 2020-2021